Paul Merson wuxuu ku dhaartay Liverpool
Jurgen Klopp waa inuu la ciyaaro Thiago Alcantara toddobaad kasta haddii Liverpool ay dooneyso inay difaacato horyaalkeeda, sida uu qabo Paul Merson, khabiirka Sky Sports.
Arsene Wenger oo ka falceliyay “xiddigga”
Xiddiga reer Spain ayaan u ciyaarin Reds muddo dheer tan iyo markii uu yimid xagaagii xilli ay ka niyad jabeen dhaawacyo.
Laakiin waqtigiisii ​​yaraa, wuxuu xakameeyay ciyaarta wuxuuna muujiyay tayadiisa cajiibka ah.
Hal-abuurkiisa ayaa weerarka Liverpool u qaadi doona heerka xiga, halkaasoo kooxaha casaanka ah ee kooxda ka soo horjeeda durba la qabsanayaan taatikadii hore ee Klopp si ay boos uga helaan daafacyada.
Si kastaba ha noqotee, Thiago wuxuu awood u leeyahay inuu diro baasas loo rogi karo goolal, waana sababta uu xiddigii hore ee Arsenal Paul Merson u aaminsan yahay in Reds ay ku guuleysan karto koobka.
Merson ayaa u sheegay Sky Sports: “Waxaan dareemayaa in kooxaha ay haatan kusii dhowaanayaan Liverpool, ma siinayaan boos, waxay kusii dhowaanayaan darbi weyn.
“Liverpool waxay ku dhibtooneysaa inay iskuxirto qadka dhexe, waxay ubaahan yihiin Thiago inuu ciyaaro usbuuc walba, waa kan arki kara hadafka la marayo.
“Waxaan u maleynayaa Jurgen Klopp inuu ka warqabo arintaan, sababtoo ah wuxuu xitaa qaatay Xherdan Shaqiri kaasoo waligiis ku fikirin inuu u ciyaarayo Liverpool daqiiqad kale. Laakiin Shaqiri wuxuu mari karaa irbad isha dhexdeeda.
“Liverpool wali waa kooxda ugu fiican adduunka, laakiin markii ay boos heli waayaan, way ku adagtahay inay goolal dhaliyaan.
“Thiago waa inuu ciyaaro usbuuc walba. Wuu arki karaa hadafka laga gudbayo, waxaan haynaa cadeyn kulamadii ugu dambeeyay. Had iyo jeer ma guuleysto laakiin waa caqli badan.
Khadka dhexe ee Liverpool ayaa ka dambeeya wax walba – waa geesiyaal aan la garanayn.
“Waxay ilaaliyaan afarta daafac, waxay u ogolaadaan meelaha dhaadheer inay weeraraan, waxayna u ogolaadaan seddexda weeraryahan inay sameeyaan waxa ay doonayaan.”
axadle 5837 posts
Iska iloow Mourinho, Van Gaal & Moyes – Ole Gunnar
The 11 Healthiest Truffles to Have, In accordance with